Qunsuliyadda Turkiga Ee Hargeysa: Hawl-fududayn Mise Hagardaamayn!W/Q; Cabdiqani X, Cali. | WAJAALE NEWS
Qunsuliyadda Turkiga Ee Hargeysa: Hawl-fududayn Mise Hagardaamayn!W/Q; Cabdiqani X, Cali.
August 7, 2019 - Written by Editor:
Warqadda caafimaadka qofka